Nwere ike ịnyịnya ígwè gafee Richmond-San Rafael Bridge? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Richmond san rafael Bridge bike lane - viable solutions
Nwere ike ịnyịnya ígwè gafee Richmond-San Rafael Bridge?
Ugbu a, ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme njem ọdịda anyanwụakwabanye na Marin County na Francisco Boulevard East, nke nwere ụzọ ụkwụ na-akwụsị mgbe nkeji iri na ise gachara. Ndị na-agba ịnyịnya ígwè ga-ekeziri ụzọ ahụ n'ụgbọ ndị ọzọ.Ọnwa Ise 4, 2021
ọkachamara roubaix 2018 nyocha
Nwere ike ịga ije na San Rafael Bridge?
N'oge mgbụsị akwụkwọ nke 2019, ụzọ dịpụrụ adịpụ dị kilomita 4,5 maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ndị ji ụkwụ aga n'elu oche elu nke Richmond-Akwa San Rafaelmeghere, na-ejikọ ndị ọrụ nzọ ụkwụ na mpaghara nke Marin na Contra Costa maka oge mbụ na akụkọ ihe mere eme nke afọ 64.
Kedu ka m ga-esi kwụrụ ụgwọ ọnụ akwa mmiri Richmond-San Rafael?
Ị nwere ikekwuo ugwoiheỤtụ okporo ụzọmakaRichmond-Akwa mmiri San Rafaeliji ego ma ọ bụ elektrọnik site na Fastrak. Ọnụ Goldenzọ Goldenmá ỌlaedoÀkwà mmirinaanị na-anabata kọmputaụtụ. Ị nwere ikekwuo ugwoakwụkwọ ọnụahịa gị na ebe nrụọrụ weebụ Fastrak, jikọọ na akaụntụ akụ gị ma ọ bụ kpọọ ha na (877) 229-8655.
Ogologo oge ole bụ San Rafael Richmond Bridge?
Akwa Richmond-San Rafael/ngụkọta ogologo
Ego ole ka ọ na-eri iji gafere Golden Bridge Bridge?
Ọ bụ n'efujee ijema ọ bụ igwe kwụ otu ebegafee àkwà mmiri nke Golden Gate. Onye ji ukwu aga ijebụn’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke na-agba ọsọtinyerethe north (n'ọnụ mmiri) n'akụkụ nkeakwa. Bikes na-agba ịnyịnya n'akụkụ abụọ ọ bụla, dị ka usoro oge kwa ụbọchị si dị. Ndị ọkwọ ụgbọala na-akwụ ụgwọ ($ 7.25) mana naanị na-abata na San Francisco.
Enwere ọnụ ụzọ ámá Golden Golden?
NaAkwa Ọdọda Ọhanjikọ City nke San Francisco na County nke Marin tinyere US Nsoro 101. Ọkwọ ụgbọala na-akwụ ụtụ isi na ndịda ndida, na ndịda na njedebe nkeakwa.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ị gafere FasTrak na - enweghị ngafe?
Ọ bụrụ na ịjiri uzo awara awarana-enweghịa ntiFasTraknnukwu ụbọchị,gịga-enweta ọkwa mmebi. Ndị na-esonụ bụ usoro nke ntaramahụhụ na-egbochi ụtụ: Nkwupụta izizi enyere: $ 25 ntaramahụhụ. Nke abụọ (delinquent) ọkwa enyere: $ 70 ($ 25 ntaramahụhụ tinyere $ 45 mbubreyo ego).
Ego ole ka àkwà mmiri Golden Gate dị?
Na-agafeAkwa Ọdọda Ọhaga-efu dị kaukwuudị ka $ 9 maka ndị ọkwọ ụgbọala malite Tọzdee.Ọnụmaka ugbo ala axle abuo site na $ 7.70 rue $ 8.05 maka ndi oru FasTrak; site na $ 8.40 ruo $ 8.60 maka ndị ọkwọ ụgbọala 'ịkwụ ụgwọ-dịka ị ga-esi'; site na $ 8.70 ruo $ 9.05 maka ndị ọkwọ ụgbọala na-enweghị Fastrak. Carpoolụtụga-esi na $ 5.70 ruo $ 6.05.7 ụbọchị gara aga
Onwere umu azu shark di n'okpuru akwa onu ogugu nke Golden?
Obi dị m ụtọ, ebe Great Whites dị ọtụtụ tinyereCalifornian'ụsọ oké osimiri, na-eyi egwuakụmadịghị adịkarị mkpan'okpuru Ọdụ Gatezọ Goldenmá Goldenileta anyi. Onye nke abuo kaririazụ shark naBay bụ Smoothhoundakụm, nke na-eto eto ruo mita atọ n’ogologo.
Ọ nwere nnwere onwe ị gafere n'ofe akwa Ọdọ Mmiri Golden?
Ọ bụenwere onwe gị ịga ijema ọ bụ igwe kwụ otu ebegafee àkwà mmiri nke Golden Gate. Zọ ụkwụ ji ụkwụ aga bụ akụkụ nke ọwụwa anyanwụ nke na-agbatinyerethe north (n'ọnụ mmiri) n'akụkụ nkeakwa.
Ebee ka ụzọ Richmond-San Rafael Bridge dị?
Zọ ahụ na-aga n'akụkụ ugwu nke Interstate 580 site na Castro Street na Richmond gafee elu elu nke akwa ahụ ruo East Francisco Blvd. na San Rafael.
Ọ nwere ụzọ igwe kwụ otu ebe na San Rafael?
Roughzọ igwe kwụ otu ebe na kilomita isii maka nke mbụ ya na-ejikọ Bay Trail n'etiti mpaghara Contra Costa na Marin, na-agbakwunye njikọ ọzọ maka ịnyịnya ígwè 500-mile na ọdịmma ntanetị maka ọdịnihu maka ndị bi na mpaghara abụọ ahụ.
Kedu mgbe oghere San Rafael mepere na San Francisco?
Mgbe o mepere, ọdọ mmiri Richmond – San Rafael bụ akwa mmiri ikpeazụ gafere San Francisco Bay iji wee dochie ọrụ ụgbọ mmiri gara aga, na-ahapụ ụgbọ mmiri Benicia – Martinez gafee Carquinez Strait dịka naanị ụgbọ mmiri fọdụrụnụ na Bay Area (ọ ga-anọchi ya akwa na 1962).